यहाँ छन् कसरी तहगत गहनाको चलन - सेलेब स्टाइल
यहाँ छन् कसरी तहगत गहनाको चलन
यसैले हामीले यो पहिले भनिसकेका छौं, हामी यसलाई फेरि भन्दछौं..एकसेसरीहरूले तपाईंको लुक बनाउँदछ वा भंग गर्दछ। अवधि तपाईंले आफ्नो लुगामा कति विचार राख्नुहुन्छ भन्ने फरक पर्दैन तर तपाईंको लुक अझै अपूर्ण रहन्छ यदि यो सही आभूषणको साथ पूरक छैन भने। यो तपाईंको लुकको सानो भाग जस्तो लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा यो तपाईंको जिम्मेवारीको लागि ज्यादै आवश्यक ड्रामा र ज्याज दिन जिम्मेवार हुन्छ। त्यस्तै एक प्रवृति जुन तपाईंले प्रयास गर्नुपर्दा हो, लेयर्ड ज्वेलरी प्रवृत्ति।
तपाईले सोधेको स्तरित गहना को प्रवृत्ति के हो? यो सजीलो जस्तो देखिन्छ, नेकपीसको केवल एक टुक्रामा चम्काउनुको सट्टा, तपाईले दुई-दुई टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ र मिक्स एन खेल खेल्नुहुन्छ! यो चाँदीको चेन वा लक र कुञ्जी पेंडन्ट सेटको साथ भागदार सुनको नेकपीस हुन सक्छ। तपाईं मनपराउन जति धेरै खेल्न सक्नुहुन्छ र यो ईमानदारीसाथ छ जहाँ सबै रमाईलो छ। केवल तपाईंलाई सुरू गर्न क्यू दिनको लागि, हामीले हाम्रा केही फेभ सेलेब्रेटेड लेयर्ड ज्वेलरीलाई सर्टलिस्ट गरेका छौं। त्यसैले हामी यहाँ जान्छौं!
कसरी सोनम कपूरले यहाँ एक नाटकीय संग एक daity हीरा नेकपीस लेयर गरेको प्रेम गर्दै। याद राख्नु पर्ने अर्को चीज भनेको एउटा चोकरलाई पनि समावेश गर्नु भनेको स्तरित टुक्राहरू मध्ये एक जस्तो उसले गरेको छ।
प्रेम प्रेम प्रेम कसरी डीपी धेरै चर्को सुन चेनहरु यहाँ जोर आवाज को साथ रक गर्दैछ। त्यसो भए कुञ्जी भनेको सही ब्यालेन्सको प्रहार हो। यदि तपाईं भारी मेक-अप गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको लेयर गरिएका टुक्राहरूलाई हल्का र विपरित राख्नुहोस्।
दीपिका पादुकोण निश्चित रूप लेयरिंग प्रवृत्ति मन पर्छ। र हामी माया गर्छौं कसरी उनीले नेरीपीसहरू राख्ने काममा रोकीन्। उनी पनि स्ट्याक्ड बंगुल खेल (जुन हामी समान रूपमा प्रेम गर्दछौं) खेलमा खेलिरहेकी छ।
सधैं एक रमाईलो तरीका लेयरड सेटमा तपाइँको इनिशिअलहरू थप्न। कियारा आडवाणीबाट ठीक यो कसरी गर्ने सिक्नुहोस्।
रमाईलो नेकपीसेसको साथ सेतो शर्ट भन्दा राम्रो अरू केहि छैन। विशेष गरी पूजा हेगडेले लगाएको बहु-रंगीन चेन मनपर्‍यो,
आमा-देखि-हुन करीना कपूर खान के हामी डेनिम, लेयर्ड ज्वेलरी लुकमा यस डेनिममा drooling छ? तपाईं धेरै faane।
तहगत मोतीका टुक्राहरू पूरै भिन्न मूड हुन्। ज्याकलीन फर्नान्डिसबाट मोती कसरी टाउने भन्ने बारे सिक्नुहोस्।
यो पनि पढ्नुहोस्: यो मूडी मौसम मौसमको लागि दुई-इन-एक वार्डरोब आवश्यकहरू
प्राकृतिक रूपमा अनुहारको कपाल हटाउने
भारतीय केटीहरु को लागी अगाडि कपाल
घरमा पेटको बोसो व्यायाम कम गर्नुहोस्